Ngenxa yokuzikhandla abalimi kancane kancane kuhoxiswe izinhlobo ebusika-eziqinile cherry, okwenza bakwazi ukujabulela ukunambitheka obucayi izithelo asanda abelethwe kude Ezindaweni eningizimu.
Cherry izithelo uvuthwe ekuqaleni kunabanye, futhi ngaleyo ndlela ukuvula isizini nezithelo berry. Bona simdumise izingane kanye nabantu abadala. Lokhu kubenza bathandeke kakhulu ngoba amnandi, ukunambitheka kwabo olubucayi. Kuqukethwe amajikijolo amavithamini (A, B1, B2, E, P, futhi C), micro- futhi macroelements (malic acid, flavonoid, coumarin, pectin, carotene ne fructose), amaminerali (manganese, calcium, potassium, ithusi, fluorine, ayibe yensimbi ne phosphorus) ukunikeza cherry ilandelana ne ukudla eyigugu kakhulu. Kubaluleke ngokukhethekile ngenxa ukuzinza we emathunjini ipheshana, inhliziyo, futhi hematopoietic izinhlelo, ukusekela ithoni. Futhi, ukusetshenziswa kwalo kuvusa umsebenzi asebenzayo we izinso, igazi kwehlisa cholesterol. Lezi izindawo ezibalulekile endowed cherry.
Izinhlobonhlobo ithebula ukuqokwa (Gini) kafushane egcinwe malotransportabelny. Ngokuyisisekelo izinhlobo zakuqala-ukukhula. Kukhona izinhlobonhlobo iqembu bigarro, okungukuthi, yokuvuthwa maphakathi kanye sekwephuzile. Ahloselwe isitoreji yesikhathi eside, ukucutshungulwa (ayo, compotes, sezimoto futhi isagcine).
Sweet cherry izinhlobonhlobo zakuqala irowu yokuvuthwa
Lona izinhlobo ekuseni ethandwa kakhulu. Nokuvuthwa ngempela izithelo ezinkulu (6-8 g) iqala ekupheleni Meyi. Fruiting njalo, uyephana, kuthathela ngonyaka-4-5.
Umbala oyinhloko imikiswe-amise okwenhliziyo izithelo yellow, othi awube bomvu isigamu. Juicy, ithenda, inyama gristly kunobuciko dessert. Izithelo amelana ngokuhlaziya isikhumba nemvula. Lolu hlobo lokuthonya cherry amelana canker webhaktheriya zamatshe nezithelo moniliosis.
nokuvuthwa IMisa naphakathi amajikijolo abomvu (5-6.5 g) kusukela eyishumi lesibili enyangeni kaMeyi. Nothile Kuveza elimnandi, ephethe ukunambitheka emnandi enuka omuncu, amajikijolo ziphezulu kakhulu. Kodwa ukuphakama unikezwa, abukhali ekhelini esiqwini kwenza kube nzima ukuqoqa. Lolu hlobo lokuthonya abandayo nemithi.
Esikhulu (esifika ku 9 g) izithelo uvuthwe ngasekupheleni May. I amajikijolo amnyama obomvu, lapho zivuthiwe acishe black, imibala Site kabusha. Ukuphakama isilinganiso isiqu ivumela sokuvuna egcwele. Izinhlobonhlobo linamandla ezifweni, hardiness ebusika.
grade Isilinganiso cherry yokuvuthwa
Ekuqaleni kuka-June uvuthwe Usayizi medium (4.5 g) pink berry izinhlobo hardiness.
cherry okunjalo isivuno eliphezulu - 50 kg isihlahla omdala amelana isikhunta elimazayo. Yini embi ngalo lolu hlobo lwezinto kubhekwa samobesplodie (ngoba kubalulekile impova wempova Cheremashnaya noma Crimean kukhona okungcono).
Isihlahla izihlahla giant stem main eneminyaka engu-3-4 iminyaka. Ngesikhathi esifanayo yobudala fruiting iqala ekuqaleni kuka June. Amajikijolo zinkulu, yellow nge ukunambitheka amnandi futhi omuncu uju. Winter hardiness kuyinto ophansi.
izinhlobonhlobo Late cherry yokuvuthwa
Samobesplodny, ezihlukahlukene ebusika-eziqinile olumelana isifo. Lapho ngineminyaka engu-iminyaka engu-5 iqala ukuthela izithelo. Pink izithelo round ukuma Usayizi medium, amelana ngokuhlaziya. bempova Kunconywe - Tyutchevka, nomona Ovstuzhenka, Iput.
Nokuvuthwa we amnyama obomvu, amajikijolo cishe black ewela ezinsukwini zokugcina June.
Isithelo uginindela zibomvu amnyama ezinemishwe nge white, namanzi, gristly, ephethe ukunambitheka amnandi futhi omuncu. I amajikijolo Site ukucutshungulwa, ezokuthutha, USB. Izinhlobonhlobo has ukumelana nesomiso, hardiness ebusika. Samoplodnye.
Kuyini i-MRI: isimiso isithwebuli kanye kusebenta kwahulumende amakhono
YaseZimbabwe wathungela: izinhlobo nezindlela sokwenza
Kuyini iwayini lakho ozithandayo uzokutshela ngawe?